Madaxweyne Deni oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay Nairobi | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweyne Deni oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay Nairobi
Madaxweyne Deni oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay Nairobi
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xulufaysi siyaasadeed oo ku wajahan Doorashada 2020/2021, wuxu ka bilaabay Magaalada Nairobi ee xarunta Waddanka Kenya.
Warbaahinta ayaa ogaatay in Madaxweyne Deni uu halkaasi u tegay hirgelinta xulufaysi siyaasadeed oo ku aaddan Arrimaha Doorashada Soomaaliya, maalmo kadib markii la soo saaray Habraaca iyo Jadwalka Doorashadaas.
Wararku waxay sheegayaan, in Madaxweyne Deni uu Magaalada Nairobi kulamo kala duwan kula yeelan doono, siyaasiyiin miisaanleh oo damac kaga jiro Doorashada soo socota iyo sidoo kale wakiilo ka socda dalalka daneeya Arrimaha Soomaaliya.
Kulamada badankooda waxa la filaya in ay noqdaan kuwa qarsoon oo aan la shaacin, inkastoo laga yaabo in qaarkood la shaaciyo.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale isna lagu wadaa in uu maalmaha soo socda gaaro Magaalada Nairobi, islamarkaana ku biiro kulamada siyaasadeed ee uu halkaasi ka wado Madaxweyne Deni.
Maqaal horeSawirro: Ciidanka Galmudug oo gaaray goob uu ka taagnaa muran dhul
Maqaal XigaSawirro: Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Suudaanta Koonfureed